Tụnyere n'etiti Apple CarPlay na gam akporo Auto [Video] | Esi m mac
Tụnyere n'etiti Apple CarPlay na gam akporo Auto [Video]
Eziokwu bụ na obere obere na ọtụtụ ụgbọ ala na-hụrụ na mwekota nke CarPlay na n'ikpeazụ anyị na-amalite ịhụ otú Nsukka na-esiwanye ịkụ nzọ na ya mmejuputa iwu na ọhụrụ ụdị. Mana n'eziokwu na ọ bụ ezie na oge ọ bụla a na - emeziwanye sistemụ ndị a na mmelite dị iche iche dịka iOS kachasị ọhụrụ, nke na - agbakwunye ụfọdụ ndozi na CarPlay, ha dị ntakịrị akwụkwọ ndụ taa. N'ọnọdụ ọ bụla nke kachasị mma na nke a bụ na naanị site na ịkwalite ha nwere ike ịchacha ma mee ka ha rụọ ọrụ nke ọma karịa ka ha na-eme taa.
Nke a bụ ihe ọchị vidio ha mere ndị youtubers nke ọwa The Poolu Pipes, ịhụ onye ga-enweta mmeri n’etiti nyiwe abụọ ahụ ọ dị ka onye ọrụ «onye na - agbachitere» gam akporo Auto na - enweta mmeri, mgbe ọ jụsịrị ajụjụ iji ruo ebe ọ ga - aga ma ọ bụ ọbụlagodi izipu ozi:
N'ihe banyere Apple CarPlay anyị ga-adịkwu ntakịrị ihe anyị na-ekwu ka o wee ghọta anyị dịka a pụrụ ịhụ ya na vidiyo. Sistemụ abụọ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ma a bịa n'iji ngwaọrụ eme ihe mgbe ị na-anya ụgbọala, mana na vidiyo Jakub na Yuri ọ dị ka usoro gam akporo na-arụ ọrụ nke ọma karịa ịghọta ihe anyị na-ekwupụta. N'echiche a, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere ịchị ọchị n'oge ọdịda nke onye ọrụ na-agbachitere CarPlay nwere, ọ bụ ya mere o ji dị mma na ụlọ ọrụ na nke a Apple, meziwanye akụkụ ụfọdụ nke usoro ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Tụnyere n'etiti Apple CarPlay na gam akporo Auto [Video]
Carlos Cosco dijo
odi ka imeri .lol na-etipia ya ..
Zaghachi carlos cosco
Siri, mepee ngwa Photos ma chọta m foto site na Jenụwarị 2015
Podcast 8x28: Mmelite na cascoporro